जब सुशान्त राखी सावन्तको सपनामा आए… – Jagaran Nepal
जब सुशान्त राखी सावन्तको सपनामा आए…
काठमाडौँ । बलिउडकी विवादित आइटम गर्ल राखी सावन्तले सुशान्त राजपुतका बारेमा सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। उनको बयानले असंवेदनशीलता पार गरेको भन्दै उनको आलोचना गरिएको छ।
राखीले सुशान्त आफ्नो सपनामा आएर पुर्नजन्म लिने कुरा सुनाएको बताएकी छिन्। यतिमात्रै हैन् उनले सुशान्तले आफ्नो कोखमा पुर्नजन्म लिने बताएको पनि भन्न भ्याएकी छिन्। उक्त अभिव्यक्तिपछि राखीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
उनले भनेकी छिन्, ‘रातमा सुतिरहेकी थिए, अचानक ठूलो झट्का लाग्यो। मैले सोधे, को हो ? आवाज आयो सुशान्त। के तपाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? सुशान्त मेरो सपनामा आए र भने म फेरि जन्म लिन्छु, मेरा फ्यानलाई भनिदिनु मैले फेरि पुर्नजन्म लिनेछु । मैले भने कसरी, उनले भने, राशी तिम्रो कोखमा मैले जन्म लिनेछु।’
राखीले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै सुशान्तका बारेमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन्। अभिनेता सुशान्त गत आइतबार मुम्बईको बान्द्रा स्थित आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए।उनको आत्महत्या प्रकरणमा धेरैको विभिन्न अभिव्यक्ति आइरहेका बेला राखीले पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी छिन्।
आँचल शर्मा र उदिप श्रेष्ठको बच्चा कहिले ? भन्ने प्रश्न पत्रकारले सोधेपछि दीईन मुखभरिको जवाफ (भिडियोसहि)
तस्विरमा हेर्नुहोस मुख्यमन्त्री राईकी हुनेवाला श्रीमती, यिनैसंग माघ ११ गते गास्दै छन् लगनगाँठो